मितज्यूले गर्नुभो, म पनि गरौँला:: राजेशपायल राई « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
मितज्यूले गर्नुभो, म पनि गरौँला:: राजेशपायल राई
४ असार २०७१, बुधबार २३:२० मा प्रकाशित
युवा पुस्ताका चर्चित गायक हुन् राजेशपायल राई । आधुनिक गीत हुन् वा चलचित्रका, हरेक गीत गायनमा उत्तिकै निपुण मानिने गायक राई अहिले नेपाली चलचित्रहरूमा सबैभन्दा बढी गीत गाउने गायकका रूपमा स्थापित छन् । पहिलो चलचित्र ‘गरिब’देखि हालको चलचित्र ‘नाइँ नभन्नु ल–२’सम्म आइपुग्दा उनले गाएका कुनै पनि गीत असफल भएनन् । विभिन्न मञ्चमा गीत गाउनकै लागि अन्य गायक–गायिकाको तुलनामा बढी विदेशको यात्रा गर्ने राई हालै मात्र अस्ट्रेलियाबाट फर्केका हुन् भने चाँडै अमेरिका र क्यानडा जाँदै छन् उनी ।
० तपाई:लाई विदेश गएर गाउन रुचाउने गायक भन्न मिल्छ ?
– रुचाएरै म गाउनका लागि विदेशिने गरेको होइन । सुरु–सुरुमा रहर थियो होला तर अहिलेचाहिँ भन्नुपर्दा एकप्रकारले बाध्यता नै हो । जहाँसम्म तुलनात्मक रूपमा बढी विदेश जाने गायक भन्ने सवाल छ, म आफैँले बखान गर्न त नमिल्ला, तर यात्रा गरेका मुलुकको सङ्ख्या गन्ने हो भने धेरै नै भए ।
० बढीचाहिँ कुन मुलुक पुग्नुभयो ?
– हङकङ र कोरिया पुगियो होला ।
० यी दुई देशमा कति–कति पटक पुग्नुभयो ?
– दुई दर्जन पटक गइयो होला ।
० यत्रो मुलुक घुम्नुभयो, कतै जीवनसाथी भेट्टाउनुभएन ?
– अँ ! त्यतातिरचाहिँ सोचिएन ।
० अबचाहिँ सोच्ने हो कि ? तपाई:को मीतज्यू राजेश हमालले पनि गर्नुभयो नि ?
– अबचाहिँ सोच्ने कि भन्ने विचार आएको छ । मीतज्यू राजेश हमालले पनि यस्तै सल्लाह दिनुभएको छ ।
० राजेश हमाल र तपाई: साँच्चिकै मीतज्यू हो कि क्या हो ?
– साँच्चिकै भन्नाले हामीले औपचारिक मीत लगाएका छैनौँ, तर एक–अर्कालाई बोलाउँदा हामी मीतज्यू भनेर सम्बोधन गर्ने गर्दछौँ । यो सम्बन्ध वर्षौ: लामो भइसक्यो । त्यसकारण औपचारिकभन्दा पनि बलियो भइसक्यो यो सम्बन्ध ।
० कुनै समय मदिरापे्रमी हुनुहुन्थ्यो, अहिले के छ नि ?
– त्यस्तो छैन, त्यसबखत पनि हल्ला नै बढी थियो । अहिले छैन । म मदिरा होइन, गीत/सङ्गीतपे्रमी हुँ ।
० राजेशपायल राईले पनि पे्रमिका गोप्य रूपमा राखेको चर्चा के हो नि ?
– त्यस्तो छैन, म सार्वजनिक मान्छे हुँ, किन लुकाउनु ?
० अरूको देखेर विवाह गर्न मन लाग्दैन भन्या ?
– लाग्छ नि ! तर, रहर र इच्छा गरेर हुँदैन नि । साइत वा लगन पनि आउनुप-यो । मानौँ त्यो आइसकेको छैन मेरो लागि ।
० गीत गाएर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण गायक तपाई: नै होइन त ?
– पैसाभन्दा पनि निरन्तरताको फल हो भन्छु म ।
० तपाई:लाई ढाल्छु, पछार्छु भनेर आएकाहरू पनि अहिले हराए नि, होइन र ?
– त्यो त क्षमता र श्रोताहरूको माया र साथमा भर पर्छ । कसैको क्षमता, दक्षता अनि क्रेजलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।